Tence Mena "Mandresy hatrany rehefa miaraka amin'Andriamanitra"
Tsy fanajana fepetra Miha maro ireo taxi be mampiasa seza afovoany
Fiara taxibe zotra 015 iray no tratran'ny polisin'ny boriborintany fahadimy tsy nanara-dalàna nitondra olona mipetraka amin'ny strapotin omaly tetsy Mahamasina.
Vakisiny, tsindrona, CVO Manazava ny mpitsabo
Ny vakisiny dia fitsaboana amin’ny alalan’ny fanalefahana karazana aretina hampidirina anaty vatan’olombelona mba hahafahan’ilay vatana mamorona hery fiarovana amin’iny karazana aretina iny, hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny klinika Saint Thomas, ny Dr Marius Ramaroson.
Andrana tsindrona faobe Tambazana 3000 miliara dolara ny mpitondra Afrikanina ?
Tsy « bacterie » na « parasite » ny covid-19 fa virus, araka ny fanazavan’ny manam-pahaizana
Antsirabe Voasazy nanadio tanàna ireo mpanao karaoke
Karaoke iray no mbola tratra nisokatra ihany tany Antsirabe na dia mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza isika.
Coronavirus 9 marary mafy any Toamasina
Miisa 19 ireo trangana coronavirus teto Madagasikara ho an’ny fitiliana natao ny 1 jona, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana omaly. 192 ny fakana singa sy fitiliana nataon’ny IPM ka 20 ny tany Toamasina,
Pr Ralandison Stéphan Nosamborina indray ?
Nosamborin’ny mpitandro indray ny Pr Ralandison ary nentina aty Antananarivo, raha ny vavao avy any Toamasina, hoy ny fampahalalam-baovao iray omaly hariva.
Nivaly omaly 29 aprily maraina ny fitiliana ny mpanakanto Tence Mena rehefa “négatif” ny valin’ny fitiliana faha-9 natao azy, ary natao fitiliana faha-10 avy eo 48ora taorian’izay, ka mbola “négatif” ihany.
Midika io fa sitrana tanteraka ary tsy mitondra ny tsimokaretina Covid-19 intsony ity mpanakanto ity, izay efa ny 19 marsa no naiditra teny amin’ny CHU Anosiala, ka 40 andro izy no nanaraka fitsaboana. Isan’ireo Malagasy tonga avy any Frantsa ny tenany, ary tany no nahavoa azy. Im-balo nisesy “positif” foana ny fitiliana natao azy, ary taty amin’ny faha-9 sy faha-10 no vao afa-bela i Tence Mena. Nisaotra ny namany sy havany ary ny mpankafy rehetra izay nitondra ambavaka azy izy, ary nisaotra manokana ny fanjakana izay tarihan'ny Filoham-pirenena sy ny IMRA nanome ny fanafody CVO izay nambarany fa nahasitrana. Nisaotra ireo nandatsa sy nanozona, nanendrikendrika, nanome teny mandratra azy ihany koa i Tence Mena satria vao mainka nampahery ahy izany ary tena nahatsapako ny fitiavan’Andriamanitra ahy, hoy izy. Fitsapana goavana be teo amin’ny fiainako izay naharitra 40 andro, saingy rehefa miaraka amin’Andriamanitra dia mpandresy hatrany, hoy ity mpanakanto ity. Hamoaka hira fiderana an'Andriamanitra ato ho ato i Tence Mena ary ho maontina fiakanjo kokoa araka ny nambarany